Caramel Sesame Kachin Walnuts ( 80g ) နှမ်းချိုဆိမ့် အရသာ – SUNNY eSTORE
Fine Local Selection
Caramel Sesame Kachin Walnuts ( 80g )...
Caramel Sesame Kachin Walnuts ( 80g ) နှမ်းချိုဆိမ့် အရသာ
Our caramel sesame walnuts haveasmooth caramel flavor with sesame that gives an amazing after taste.
The mix of sweet and nutty flavor createsadelicious snack.
If you like sweet food but wantahealthy alternative to candy, our caramel sesame mix is the product for you.
နှမ်းချိုဆိမ့် သစ်ကြားသီးအရသာတွင် အချိုရည် နှင့် နှမ်း ရောစပ်ထားသည့်အတွက် တမူထူးခြားသည့် အရသာတစ်မျိုးရရှိစေပါတယ်
အစေ့အဆန် အရသာတွင် အချိုရည် ပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် အရသာတမူထူးကောင်းမွန်သည့် အစားအစာလည်းဖြစ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေအနေဖြင့် အချိုအရသာ ရှိသည့် အစားအသောက်များကို နှစ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် ချိုဆိမ့် အစားအစာများကို ချိုချဥ်အစားထိုး ရွေးချယ်စားသုံးမည်ဆိုပါက နှမ်းချိုဆိမ့်သစ်ကြားသီးအရသာ လည်းမိတ်ဆွေအတွက် အထူးသင့်​​လျော်ပါတယ်
Use: Eat within2weeks after opening. Ingredients: Walnuts, Caramel Sauce, Sesame အသုံးပြုပုံ - ဖွင့်ပြီးနောက်၂ ပတ်အတွင်းစားသုံးပေးရန်။ ပါဝင်ပစ္စည်း - သစ်ကြားသီး၊ ချို့ဆိမ့်ရည်၊ နှမ်း